China Automatique Ferrite Magnetic Hydraulic Press Manufacture and Factory | Zhengxi
Press Press SMC BMC hydraulic
4 tsindry lalina fanaovana tsindry hydraulic
Pressure Hydraulic Magnetic Hydriz mandeha ho azy
SMC Production Line mandeha ho azy SMC milina bobongolo ...
Ireo singa ao amin'ilay masinina: press (ao anatin'izany ny fonosana tariby misy magnetisika), tobin-tsolika hydraulic, kabinetra fanaraha-maso herinaratra, rafitra fampidirana sy fampifangaroana, tanky banga; lasitra bobongolo, banga mandeha ho azy manala milina.
Famaritana teknika fototra
1) Ny rafitra paompy servo hydraulic servo dia ampiasaina hampangatsiahana ny menaka faneriterena mba hiantohana ny tsindry, ny fitoniana ary ny fahamendrehana rehefa ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ny gazety;
2) Fanjifana angovo ambany sy fitsitsiana angovo. Ny fanjifana herinaratra an'ny milina iray manontolo dia mitovy amin'ny an'ny milina 150-taonina, ary ny faran'ny fiovana dia 53% mihoatra ny an'ny milina 150-taonina;
3) Ny fenitra bobongolo mahazatra dia raikitra amin'ny mpampiantrano, ary ny faritra miolakolaka dia azo esorina haingana sy soloina rehefa soloina ny bobongolo, ary tsy miankina ny fotony sy ny bobongolo;
4) Ny tena vatana dia vy (na vy mihantona) feno vatana, ary ny latabatra ambony sy ambany, ny bobongolo, ny tariby vy mifono vy, sns ... dia ampahany vy avokoa. Tanjaka mekanika avo, rafitra matevina, faritra fametrahana kely, mety amin'ny fakana banga manual na mandeha ho azy;
5) Ny singa lehibe dia rafitra efatra-tsanganana, izay mandray fonosana tariby miorina amin'ny rivotra ambony.
6) Mampiasà efijery sy fakan-tsarimihetsika hahitanao ny fifandraisan'ny masinina, ny debugging dia mety sy haingana;
7) Ny singa hydraulic amin'ny tobin-tsolika avo lenta dia mampiasa valizy teknika Italiana,
8) Mahafa-po ny ala anaty rano ambany (atin'ny rano 34%) tsindrona mandeha ho azy, suction azo antoka ary azo antoka
Herin'ny varingarina ambony
Savaivony varingarina ambony
Voan'ny varingarina ambony
Herin'ny varingarina ambany
Savaivony ambany varingarina
Max. toerana malalaka amin'ny latabatra ambony sy ambany
Haben'ny latabatra asa (halavany X ny sakany)
Fonosana tariby miorina amin'ny rivotra avo lenta
Coil magnetizing-cooled rivotra 100000ampere-turn
Max. tsindrona boky ny tsindrona paompy
Max. fandefasana mixer
Herin'ny totalin'ny milina iray manontolo
550mm elanelana eo anelanelan'ny fototr'ireo bobongolo, 300mm ny haavony
Ny tsanganana fitarihana (andry) dia hatao C45 vy sandoka mafana ary manana hatevin'ny chrome mafy 0.08mm. Ary manaova fitsaboana mafy sy mahaleo.
Ny famolavolana ny masinina manontolo dia mandray ny famolavolana ny fanatsarana ny solosaina ary ny famakafakana amin'ny singa voafetra. Ny tanjaka sy ny hamafin'ny fitaovana dia tsara, ary ny fisehoany dia tsara. Ny tapany vita amin'ny vy ao amin'ny vatan'ny masinina dia ampidinina amin'ny lovia vy Q345B vita amin'ny vy avo lenta, izay ampiarahina amin'ny gazy karbonika mba hiantohana ny kalitaon'ny welding.
Barila vita amin'ny varingarina
Vita tamin'ny vy vita amin'ny vy sandoka sy famonoana ary famonoana 45 #
Fitotoana tsara aorian'ny fihodinana
Vita tamin'ny vy natsangana mangatsiaka, famonoana ary fanamainana
Mihodina ny faritra ary apetaka amin'ny chrome mba hiantohana ny hamafin'ny faritra ambonin'ny HRC48 ~ 55
Ampiasao ny peratra famehezana marika Japon NOK
Tarihin'ny plating varahina, fanoherana tsara, miantoka fiasa maharitra amin'ny varingarina
Fitsipika momba ny fifehezana Servo
Ny efitrano ambony ambony misy varingarina dia misy fantsom-pandrefesana, misy soloina fanaraha-maso famindra. Araka ny tsindry fanamarihana tsindry, ny mari-pamantarana fihenan-kevitra, ny mari-pamantarana omena, ny famantarana omena ary ny famantarana haingam-pandeha mba hikajiana ny hafainganam-pandehan'ny maotera servo, hifehezana ny vokatra azo avy amin'ny paompy ho an'ny tsindry, hafainganana ary fifehezana toerana.
Ny gazety dia mandray ny PID hanitsy ny tsindry sy ny toerana, amin'ny alàlan'ny hafainganam-pandehan'ny motera servo alohan'ny fifehezana loop-mihidy. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny hafainganan'ny motera servo, dia afaka mifehy ny tsindry, ny hafainganana, ny toerana ary ny masontsivana hafa amin'ny tsindry hydraulic, amin'ny alàlan'ny fanesorana ny valizy fanaraha-maso, ny valizy mifehy ny fantsom-pifamoivoizana ary ireo singa hafa ao amin'ny faritry ny fifehezana hydraulic mba hanatsorana azy.
3. Tombony amin'ny Servo System
Raha ampitahaina amin'ny rafitra paompy miovaova nentim-paharazana, ny rafitra paompy menaka servo dia mampifangaro ireo toetra mampiavaka ny motera servo haingana sy ny toetran'ny tsindry solika mifehy tena avy amin'ny paompin-tsolika hydraulic, izay mitondra hery mitahiry angovo lehibe sy ny angovo mahatratra hatramin'ny 30% -80% ny taham-mitahiry.
Haingam-pandeha ny hafainganam-pandehan'ny valiny ary fohy toy ny 20ms ny fotoana famaliana, izay manatsara ny hafainganan'ny valin'ny rafitra hydraulic.
Ny haingam-pandeha haingana dia manome antoka ny fisokafan'ny fanokafana sy ny fanidiana, ny fahamendrehan'ny toerana dia mety hahatratra 0,1mm, ary ny fiasan'ny toerana misy ny toeran'ny asa manokana dia mety hahatratra ny ± 0,01mm.
Ny modely algorithm PID avo lenta sy valiny avo lenta dia miantoka ny tsindry rafitra miovaova sy ny fiovaovan'ny tsindry latsaky ny ± 0,5 bar, manatsara ny kalitaon'ny vokatra.
Tabataba: ny feo antonony an'ny rafitra servo hydraulic dia 15-20 dB ambany noho ny an'ny paompy miovaova.
Temperature: Aorian'ny fampiasana ny rafitra servo dia mihena amin'ny ankapobeny ny hafanan'ny solika hydraulic izay manatsara ny fiainana ny tombo-kase hydraulic na mampihena ny herin'ny cooler.
Ny solosaina mpampiantrano indostrialy multi-écran dia mahatsapa ny masontsivana lehibe sy ny bitsiky ny mpanao gazety, indrindra fa ireto fampahalalana fototra manaraka ireto:
● Curve(Mpa 、 ℃） ● Voaaro amin'ny teny miafina ● Fampirantiana dizitaly ● Azo zahana ny data
Toeram-pifandraisana, 0 amin'ny toerana misokatra tanteraka
Manasitrana tsingerina, dingana ao amin'ny programa. Fanerena clamp
Sary mpiambina fiarovana an-tsary sy fiambenana
Slide Locking ao amin'ny TDC
Fitsanganana amin'ny tanana roa
Boriboritany fiantohana Hydraulika
Fiarovana be loatra: Valve fiarovana
Fanairana amin'ny haavon'ny rano: haavon'ny solika
Fampitandremana momba ny hafanan'ny solika
Ny faritra elektrika tsirairay dia misy fiarovana be loatra
Ny voanjo hidin-trano dia omena ho an'ny faritra azo ovaina
Ny hetsika rehetra amin'ny asa fanaovan-gazety dia misy fiasan-drindrina fiarovana, ohatra ny latabatra azo ovaina dia tsy mandeha raha tsy miverina amin'ny toerana voalohany ny ondana. Ny slide dia tsy afaka manindry rehefa mihetsika ny latabatra azo ovaina. Rehefa miseho ny fifandonana, aseho amin'ny alàlan'ny efijery kasihina ny fanairana ary asehoy hoe inona ny fifanolanana
1.Ny tanky napetraka dia rafitra fanivanana an-kery noterena (ny fihenan'ny chiller solika, ny hafanan'ny solika≤55 ℃ make, alao antoka fa afaka manindry milina mandritra ny 24 ora ny milina.)
2.Ny rafitra hydraulic dia mampiasa rafitra fanaraha-maso valizy mifangaro miaraka amin'ny hafainganam-pandeha haingana sy ny fahombiazan'ny fampitana avo.
3.Ny fitoeran-tsolika dia nasiana sivana rivotra hifandraisana amin'ny ivelany mba hahazoana antoka fa tsy voaloto ny menaka hydraulic.
4.Ny fifandraisana misy eo amin'ny valizy famenoana sy ny fitoeran-tsolika dia mampiasa fitambarana malefaka mba hisorohana ny fihozongozona tsy hoentina any amin'ny fitoeran-tsolika ary hamaha tanteraka ny olan'ny famoahana solika.
5.Ny fantson-tsolika solika dia vita amin'ny fantsom-by tsy misy vy, ary ny lalan'ny solika savaivony dia manidina. Ny fifandraisana fantsona dia ampifandraisin'ny SAE flange araka izay azo atao. Izy io dia karazana fantsom-boaloboka misy vokany tsara ary mamaha amin'ny fomba mahomby ny olan'ny famoahana solika ateraky ny fametahana ratsy.
Previous: Vovoka metaly mamorona press hydraulic
Manaraka: Tsindry fanamafisam-peo hydraulic block
Rafitra fanaraha-maso hydraulic
Rafitra fanaraha-maso herinaratra
Fanodina famatsiana herinaratra
Fitaovana elektrika ambany herinaratra
Vovoka metaly mamorona press hydraulic
Tsindry fanamafisam-peo hydraulic block